My iPhone agaghị agbanyụ! Ebe ị ga-ahụ ihe ngwọta dị irè! - Ndị Ọzọ
iphone na -akwụsị na 50
iphone m agaghị ejikọ na wifi m
iphone na -arịọ maka paswọọdụ iTunes
Gị iPhone agaghị agbanyụ na ị maghị ihe kpatara nke a na-eme. Eleghi anya ị na-anwa ịhapụ njikọ site na mpụga ụwa maka nkeji ole na ole ma ọ bụ na-achọ ịchekwa ọtụtụ ndụ batrị. N’isiokwu a, m ga-akọwara gị ihe mere gị iPhone agaghị agbanyụ Na otú idozi shutdown nsogbu .
Gịnị mere na iPhone m agaghị agbanyụ?
Abụkarị iPhone gị agaghị agbanyụ n'ihi na enwere nsogbu na ngwanrọ iPhone gị ma ọ bụ n'ihi na ihuenyo ma ọ bụ bọtịnụ ike anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Ihe ọ sọrọ ya bụrụ, ntuziaka a nwere ike igosi gị esi edozi iPhone nke na-agaghị agbanyụ . Na njedebe, ị ga-ama etu obibi na-adịghị anabata iPhone ihuenyo , esi gbanyụọ iPhone gị ma ọ bụrụ na bọtịnụ ike adịghị arụ ọrụ na nhọrọ ndozi ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọkachamara.
1. Gbalịa gbanyụọ iPhone
Nke mbụ bụ nke mbụ. Iji gbanyụọ iPhone gị, pịa ma jide bọtịnụ hie ụra / teta (ihe ọtụtụ mmadụ na-akpọ dị ka bọtịnụ ike). Ọ bụrụ na ị nwere iPhone na-enweghị bọtịnụ Home, pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ yana bọtịnụ olu n'otu oge.
Hapụ bọtịnụ (s) mgbe ọ pụtara swipe gbanyụọ na ihuenyo. Nke ahụ bụ akara gị iji metụ akara ike ike uhie ma jiri mkpịsị aka gị were ya wepu ya site n’aka ekpe gaa n’aka nri na ihuenyo ahụ. N'eziokwu, gị iPhone ga-emechi mgbe ị na-eme nke a. Ọ bụrụ na ọ bụghị na ị na-akpụ isi gị, gụọ.
Ndụmọdụ: ma ọ bụrụ na ịhụ ahịrịokwu a swipe gbanyụọ ”Na ihuenyo gị, mana ihuenyo gị anaghị azaghachi, gbalịa ụfọdụ aghụghọ na edemede m na ihe-eme mgbe gị iPhone ihuenyo mmetụ na-adịghị arụ ọrụ .
2. Mee a Force Malitegharịa ekwentị gị iPhone
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịmegharị ike. Iji mee nke a, pịa ma jide ụra / edemede bọtịnụ (bọtịnụ ike) na bọtịnụ Nke mmalite n'otu oge ahụ. Pịa ma jide bọtịnụ abụọ a ọnụ ruo mgbe akara Apple gosipụtara na ihuenyo iPhone gị. Nwere ike pịa bọtịnụ abụọ maka sekọnd 20, yabụ nwee ndidi!
Arụ ike ịmalitegharị na iPhone 7 ma ọ bụ 7 Plus dịtụ iche. Forcemanye Malitegharịa ekwentị iPhone 7 ma ọ bụ 7 Plus, pịa ma jide bọtịnụ ike na olu ala button n'otu oge ahụ ruo mgbe akara Apple gosipụtara na ihuenyo ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere iPhone 8 ma ọ bụ karịa, pịa ma hapụ bọtịnụ olu elu, wee pịa ma hapụ bọtịnụ olu ala, wee pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ ruo mgbe ihuenyo ga-acha oji na akara Apple.
Ighagharịa ike nwere ike inyere gị aka ịmalitegharịa ngwanrọ nke nwere ike ịrụ ọrụ. Ọ ga-amasị m imesi ike na nke a abụghị ụzọ ziri ezi iji gbanyụọ iPhone gị kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na nhọrọ mmechi kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ, jiri ụdị a. Ike ịmalitegharị nwere ike ịkwụsị ngwanrọ ahụ ma kpatara nsogbu karịa ma ọ bụrụ na ịmeghị ya n'enweghị ihe kpatara ya.
oku iphone anaghị aga
3. Tụgharịa AssistiveTouch na gbanyụọ gị iPhone na a software ike button
Ọ bụrụ na bọtịnụ ike dị na iPhone gị anaghị arụ ọrụ, ịnweghị ike ịme 1 ma ọ bụ 2 .. Ọ dabara, ị nwere ike gbanyụọ iPhone gị site na iji sọftụwia etinyere n’ime ngwa Ntọala.
Olee otú m gbanyụọ m iPhone mgbe ike button na-adịghị arụ ọrụ?
AssistiveTouch bụ ọrụ na-enye gị ohere ijikwa iPhone gị kpamkpam na ihuenyo. Nke a bara uru ma ọ bụrụ na ịnwee nsogbu na bọtịnụ na iPhone gị ma ọ bụ enweghị ike iji ya mee ihe.
Iji nweta AssistiveTouch, gaa na Ntọala> ibilitynweta> Aka> AssistiveTouch.
Kpatụ ngbanwe gaa n'akụkụ aka nri nke AssistiveTouch nhọrọ iji mee ka atụmatụ ahụ rụọ ọrụ ma gbanwee green green. Oghere na-acha ntụ ntụ na-acha ntụ ntụ kwesịrị ịpụta yana agba gbaa gburugburu n'etiti. Nke a bụ menu nhọrọ AssistiveTouch gị. Metụ square aka imeghe ya.
Iji gbanyụọ iPhone gị na AssistiveTouch, họrọ Ngwaọrụ wee metụ ma jide akara ngosi mkpọchi mkpọchi. Nke a ga-akpọrọ gị na ihuenyo nke kwuru 'slide to power off'. Dọrọ akara ngosi ike uhie site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji gbanyụọ iPhone gị.
Kedu ka m ga-esi gbanye iPhone m ma ọ bụrụ na bọtịnụ ike anaghị arụ ọrụ?
Iji gbanwee iPhone gị ma ọ bụrụ na bọtịnụ ike adịghị arụ ọrụ, tinye ya na ike. The Apple logo ga-egosi na gị na ihuenyo na i nwere ike iji gị iPhone dị na mbụ.
4. Weghachi gị iPhone
Mgbe ụfọdụ, ngwanrọ ma ọ bụ nsogbu ngwa ngwa adịghị mfe idozi. Ọ bụrụ na ị gbalịrị usoro nrụpụta dị nro na iPhone gị ka agaghị akwụsị, ọ bụ oge iji nwaa iTunes (PC na Mac na macOS 10.14 ma ọ bụ tupu) ma ọ bụ Finder (Mac na macOS 10.15 ma ọ bụ mgbe e mesịrị) iji malitegharịa ngwanrọ ahụ. site na iPhone gị.
Weghachi iji iTunes
Jikọọ iPhone na kọmputa nwere iTunes arụnyere. Họrọ gị iPhone mgbe ọ na-egosi. Nke mbụ, pịa Mee nkwado ndabere ugbu a ndabere gị iPhone na kọmputa gị, wee họrọ Weghachi ndabere . Nke a ga - akpọrọ gị gaa na ndepụta nkwado ndabere na mpaghara ịhọrọ. Họrọ nke ị ka mere.
Soro kpaliri na iTunes iji weghachi iPhone gị na ntọala ndị gara aga. Mgbe ị gwụchara, kwụpụ iPhone gị ma nye ya ọnwale. Should kwesịrị inwe ike gbanyụọ iPhone ugbu a.
ipad mini 2 anaghị akwụ ụgwọ
Weghachi ya na Finder
Jikọọ iPhone na Mac gị na Lightning USB na-emeghe Finder. Pịa Ọnọdụ -> gị iPhone (n'aka ekpe nke Finder). Pịa na Weghachi ndabere ma họrọ nkwado ndabere nke ị mepụtara mgbe ndepụta nkwado gosipụtara na ihuenyo. Soro ntuziaka iji weghachi iPhone gị.
Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu Iweghachi gị iPhone, na-agbalị eme a DFU weghachi . Ntuziaka anyị ga-egosi gị otu esi etinye iPhone na ọnọdụ DFU na ụzọ kachasị mma iji weghachi ya.
5. Chọta ihe ngwọta ọzọ
Ọ bụrụ na ị gbalịrị nro tọgharịa na weghachi gị iPhone na iTunes na gị iPhone ka na-agaghị mechie, mgbe ahụ, ihe dị oké njọ nwere ike ịbụ na-ezighị ezi na gị iPhone.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgbanyụ iPhone ka ọ ghara ịgbachi nkịtị, ịnwere ike ịgbanyụ ụda iPhone gị oge ọ bụla site na ịgbanwee / mkpọchi aka ekpe nke ekwentị ahụ. N'ụzọ ahụ, ị ​​gaghị anụ ọkwa ọ bụla.
Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị ịnweta ozi ịntanetị, oku na ederede, ọbụlagodi na ọ bụ naanị na ihuenyo ahụ, ịnwere ike ịgbalite ọnọdụ ụgbọ elu. Ọ bụ nhọrọ mbụ na elu nke ibe na Ntọala. Dị na-echeta na ị gaghị enweta oku mbata ma ọ bụ ozi na ị gaghị enwe ike ịkpọ oku oku na iPhone gị na ọnọdụ ụgbọelu. Have ga-agbanyụkwa ọnọdụ ụgbọ elu ọzọ iji nwee ike izipu ma ọ bụ nata oku ma ọ bụ ozi.
Mgbe ụfọdụ anụ ahụ mmiri (akpọ ngwaike) nke gị iPhone nwere ike dị na-akwụsị na-arụ ọrụ. Mgbe nke a mere, dochie ma ọ bụ ịrụzi gị iPhone bụ ezigbo nhọrọ.
Ọ bụrụ na gị iPhone bụ n'okpuru akwụkwọ ikike, Apple (ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ, dị ka a ụlọ ahịa ma ọ bụ gị cellular na-eweta ọrụ ma ọ bụrụ na ị zụrụ a akwụkwọ ikike site na ha) nwere ike na-enye dochie gị iPhone n'ihi na ị. Yabụ ịkwesịrị ịlele nke a.
Maka iPhone na bọtịnụ agbajiri agbaji nke akwụkwọ ikike anaghị ekpuchi, iji ọrụ nrụzi bụ otu ụzọ iji chekwaa iPhone gị ma dochie ngwaike agbajiri. Apple na-enye ndozi maka ego ma yabụ ọtụtụ ndị ọzọ, gụnyere ụlọ ahịa ndozi mpaghara. Idozi iPhone gị nwere ike belata ọtụtụ ihe karịa ịzụta nke ọhụrụ. Lelee ederede anyị na c Etu ị ga-esi chọta ndị ọrụ ntanetị na-arụ nrụzi iPhone n'akụkụ gị na ntanetị maka ndụmọdụ ndị ọzọ na ịhọrọ nhọrọ nrụzi kachasị mma.
Gị iPhone agbanyụrụ ọzọ!
Have edozila nsogbu ahụ ma iPhone gị ga-emechi ọzọ. Dị njikere ịkọrọ a isiokwu na-elekọta mmadụ media na-akụziri ndị enyi gị na-eso ụzọ ihe na-eme mgbe ha iPhone agaghị agbanyụ. Hapụ ikwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iPhone gị!